कला Archives - ratoपिरो.com - Blog for Entertainment
यी हुन्.. दुनियाकी सबैभन्दा हट-सेक्सी चोर, जसको चोरी गर्ने कला पनि विचित्रकै छ !
चोर डाँका तथा अपराधीहरु सबै खुंखार तथा डरलाग्दा मात्र हुँदैनन् । सुन्दरताले सबैलाई लठ्ठ पार्ने जिउडाल भएका कतिपय मानिसहरुको पनि आनीबानी खराब हुन्छ ।यसको उदाहरण हुन् स्टेफेनी बेयूदोइन । उनी दुनियाकी सबैभन्दा सेक्सी अपराधीको...
जादू होइन कला !!! यिनी पानीमुनि उल्टो भएर हिड्न सक्छिन् र पानीको सतहमा पनि दौडिन सक्छिन् ।
पानीमाथि हिड्ने भनेपछि कुनै जादुको काम भन्ने सोँच्नुहोला । तर लेन्का ट्यानर कुनै जादुगर होइनन् । न त उनले जादुगरले जस्तै बरफको ढिक्का वा पानीमा तैरिने वस्तुको प्रयोग गर्छिन् । स्लोभाकियाकी यी २८ वर्षे...
स्टन्टमा श्रीमान र श्रीमतीको कला, यी दृष्य देखेरै धेरैले जिव्रो टोक्छन् !!! (तस्विरसँगै भिडियो पनि हेर्नुहोस्)
[wp_ad_camp_2]यो विशाल दुनियाँमा मानिसहरु जिउनका लागि अनेक अनेक गतिविधी गर्छन् । सबैले आ-आफ्ना भूमिका खेलेकै छन् । भारतको आन्द्र प्रदेशमा यस्तो दम्पति जोडी छ जो सार्वजनिक स्टन्ट गरेर ज्यान पाल्छन् । उनीहरुको स्टन्टमा श्रीमान...
काठबाटै पनि यस्तो विचित्र कला (फोटोफिचर सहित)
प्रकृतिको संरक्षणको दायित्व मान्छेको हातमा छ भन्ने कुरा बुझाउनका लागि गुरुहरुले विभिन्न प्रवचन देलान्, वातावरणविद्हरुले विभिन्न दृष्टान्त प्रस्तुत गर्लान् अनि कतिपयले मज्जाले यहीँ विषयमा डलरको खेती गर्लान् । तर अमेरिकी कलाकार पाउल बालिकरले पनि...
हेर्दै अनौठो लाग्ने, केही तस्वीरहरु !
एउटा ठूलो खर्बुजामा एक जोडी टेनिस खेल्दैछन् । अनि अर्को एक महापुरुष नास्ता खाने दुनोटमा गल्फ खेल्ने कोसिस गर्दैछन । त्यहीँनेर अर्का श्रमजीवी हातमा ह्यामर लिएर धमाधम बदामको बोक्रा झार्दैछन् । तपाईलाई लाग्न सक्छ,...